Farriin amar ah oo loo kala diray ciidammada kala duwan ee dalka iyo Taliska Laanta Socdaalka | Araweelo News Network
Farriin amar ah oo loo kala diray ciidammada kala duwan ee dalka iyo Taliska Laanta Socdaalka
Hargeysa(ANN)Wasaaradda Arrimaha Gudaha Jamhuuriyadda Somaliland, ayaa ciidammada ammaanka kala duwan ee dalka fartay in ay laga bilaabo Isniinta maanta gacanta ku dhigaan qof kasta oo ajenbi aan waraaq oggolaanshaha ka haysan wasaaradda amma aan codsigiisa geyn.
Wasiir-ku-xigeenka Maamulka Gobollada iyo Degmooyinka ee Wasaaradda Daakhiliga Md. Jaamac Cabdillaahi Warsame (Biin), Agaasimaha Guud iyo Taliyaha Laanta Socdaalka oo shir-jaraa’id wadajir u qabtay shalay, ayaa digniin kama dambays ah u soo jeediyey dadka ajenebiga ah ee Somaliland sharci-darrada ku jooga.
Mr. Biin waxa uu sheegay in muddadii ay soo codsadeen dadka ajenebiga ah in loogu darro inay dalka kaga baxaan amma is-diiwaangeliyaan ay dhammaatay 25 February, wixii hadda ka dambeeyana tallaabo laga qaadyo.
“Wataannu hore baaq u jeedinnay, ogaysiinna u jeedinay dhammaan dadka ajenebiga ah ee Somaliland jooga in ay muddo cayiman kaga baxaan, haddii kale soo dalbadaan aqoonsiga amma sharciyadda ay ku joogayaan. Waa laga aqbali amma waa loo diidi. Waxa dhacday in ay codsi kale dadkii keeneen oo yidhaahdeen muddadaas kuma diyaar-garoobi karno. Xaq bay u yeesheen, xuquuq baanay noqotay, dib ayaana loo kordhiyey, waxaanay ku ekayd 25 February, ilaa maantana waxaannu aqoonsannahay cid kasta oo aan ilaa imminka qaadan sharcigii amma soo dalban in ay ka maarmeen inay oggolaansho Somaliland ah qaataan,” ayuu yidhi Md. Jaamac Cabdillaahi Biin.
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Daakhiliga Md. Cabdifataax Siciid Axmed, ayaa isaguna faray kuna amray ciidammada ammaanka in ay hadda wixii ka dambeeya qabtaan dadka ajenebiga ah ee aan haysan waraaq oggolaansho ay dalka ku joogayaan, “Waxaan u sheegaynaa in dadka ajenebiga ah ay iska diiwaangeliyaan Wasaaradda Arrimaha Gudaha. Waxa aan u sammaynay hab cusub oo Online ah in lagu diiwaangeliyo. Faraha laga qaadaya, indhaha laga sawirayaa sida muwaaddiniinta caadiga ah loo sameeyo si loo ogaado haddii dadka dalka jooga ay dambi galaan, laguna soo qaban karayo. Waxa aan faraynaa ciidanka booliska, laanta socdaalka, ciidanka Somaliland jooga iyo ciidanka xeebaha in laga bilaabo ciddii ajenebi ah ee aan Wasaaradda Arrimaha Gudaha sharci ka haysan ay soo qabtaan,” ayuu yidhi Agaasimaha Guud.
Sidoo kale, Taliyaha Laanta Socdaalka Md. Dayib Cismaan Caalin, ayaa xusay in ay fulinayaan amarka ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Gudaha.
“Ciidammada ammaanka Somaliland ee Arrimaha Gudaha hoos yimaada oon annigu ka joogo, madaxii Laanta Socdaalka, sidaas ay Wasaaradda Arrimaha Guduhu fartay, wasiirka iyo agaasimaha hadlay amarkooda ayaannu fulinaynaa,” ayuu yidhi Taliye Caalin.